Ufake isicelo ngokuqondile ku-RAF, kodwa ayikho inqubekela phambili noma impendulo noma ucabanga ukuthi awutholanga inkokhelo ekufanele! - APRAV
Ufake isicelo ngokuqondile ku-RAF, kodwa ayikho inqubekela phambili noma impendulo noma ucabanga ukuthi awutholanga inkokhelo ekufanele!
1st Feb 2020 /in Zulu Need Help /by Julie Rosenbaum
U-RAF ukhangisa ukuthi isisulu sengozi yemoto kumele sifake isicelo ngokuqondile kubo – ngaphandle kosizo lommeli. Bathembisa ukuthi lena yindlela elula nesheshayo nezokongela ofaka isicelo imali, kodwa ngokudabukisayo lokhu akwenzeki.
Amaqiniso awukuthi izindimbane zezinxephezelo zishiywe zinganakiwe futhi aphelelwa yisikhathi. Futhi abaningi abafake izicelo abakakhokhelwa yonke imali yabo ebafanele ngokomthetho (kukhokhwe encane noma akunakwanga). U-APRAV uthola izingcingo eziningi maviki onke lapho abafake izicelo benganakwanga ngokukungafanele, bencishiselwe noma bemane nje bezitshwa.
Amagama akho aphelele
Inombolo kamazisi wakho (ID)
Incazelo emfushane yokulimala kwakho
Kungani u-APRAV etusa ukuba usebenzise izinhlelo zabameli abanokuhlangenwe nakho?
Ummeli uzokusiza ulungiselele kahle ukunxeshezelwa, ukuze uthole imali okudinga oyithole ngokomthetho! Bazo:
Bazobona ukuthi kumele ufake izicelo noma cha
Bazokuqondisa phakathi nequbo enzima.
Bathole imininingwane ye-SAPS bese behlela yonke imibiko yezokwelapha edingekayo.
Bakukhulumele ne-RAF (baye ngisho nasenkantolo).
Ingabe ukhathazeke ngezindleko ezingokomthetho? Sikhona isisombululo! Abameli basebenza ngaphansi kokuthi ‘uma singaphumeleli, awukhokhi lutho’. Ayikho edingeka kuqala!
Sizoqinisekisa ukuthi uthola konke ukusekelwa okudingayo. Ungasithinta:
Ngokuthumela ‘call me back’ ku-063 393 3719
Ngokuthumela i-WhatsApp ku-063 393 3719
Ngokucofoza lapha ukuze uthumele imeyili
Omunye wamalunga ethu uzokuthina phakathi nezinsuku ezimbalwa.
https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png 0 0 Julie Rosenbaum https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png Julie Rosenbaum2020-02-01 10:24:162020-02-24 11:58:29Ufake isicelo ngokuqondile ku-RAF, kodwa ayikho inqubekela phambili noma impendulo noma ucabanga ukuthi awutholanga inkokhelo ekufanele!
Ingabe wena noma othile omaziyo oke waba sengozini yemoto, futhi nifuna isinxephezelo... Ufake isicelo kummeli kodwa ayikho inqubekela phambili noma impendulo noma ucabanga...